Soo dejisan Dashlane 6.1933.0.22573 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Dashlane
Dashlane – mid ka mid ah maamulayaasha sirta ah ee ugu awoodda badan oo leh taageerada jaantuska dariiqa. Software wuxuu u kaydiyaa macluumaadka qarsoodiga ah ee foomka loo yaqaan "encrypted form" oo ku yaalla server-keeda iyo aaladaha isticmaalaha, waxaad u baahan tahay inaad gashid password-kaaga si aad u saxiixdo koontada iyo helitaanka xogta la keydiyay. Dashlane waxay macluumaadka xisaabaadka ka dhigtaa kadib markii ay galaan boggaga internetka waxayna dib u soo celinayaan booqasho labaad. Dashlane waxay kuu ogolaaneysaa inaad buuxiso foomamka lacag bixinta ee internetka, rasiidhyada, aqoonsiyada iyo macluumaadka shakhsiyeed. Software wuxuu ka kooban yahay module gaar ah oo badali kara badhanka internetka oo leh riix hal kaliya. Dashlane waxay sidoo kale taageertaa furayaasha iyo qoraallada la wadaago dadka isticmaala diiwaangashan ama xiriirada xaaladaha degdegga ah.
Soodhadhka saxda ah ee badalashada bogagga internetka
Fududaynta shabakadda ee shabakada
Taageero xaaladaha degdegga ah
Soo dejisan Dashlane
Faallo ku saabsan Dashlane
Dashlane Xirfadaha la xiriira